Global Voices teny Malagasy » Bolivia: tamin’ny fetin’ny Olomasina rehetra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2007 9:11 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Bolivia, Zavakanto & Kolontsaina
Tsy hoe efa ho iray volana lasa izay ity no nitranga dia avela any fa misy kosa ny ampitahana izay voambara manaraka eto amin’ny fomban-drazantsika Malagasy. Vao avy nankalaza ny fialantsasatry ny Todos Santos, fetin’ny Olo-masina rehetra , i Bolivia. Misy fomban-drazana ao an-toerana moa nasisika tamin’ity fankalazana lehibe ity. Fianakaviambe sy mpiray tanàna no mivory hikarakara mofo, manangana alitara (ôtely) mba handraisana ny fanahin’ny havana efa maty ary mandeha mankeny antokotanim-pasana koa. Nisy mpandray anjara maromaro tamin’ny fampahafantarana ny haino aman-jerin’olom-pirenena ny feon’i Bolivia na Voces Bolivianas  (misy vatsy fanohanana avy amin’ny Rising Voice) no nisafidy hiresaka ity fankalazana (avy eo an-tanànan’i El Alto) ity ao amin’ny bolongany.
Alberto Medrano ohatra ao amin’ny El Alto Noticias [es] naka ny fomba fijerin’ny mpanao gazety  handinihana ny tantaran’ity fety ity sy namakafaka ny fifaninanany amin’ny fetin’ny Halloween.
Cristina Quisbert kosa mitantara ny fandaharam-potoana mandritra ny andro  ao amin’ny Bolivia Indigena [es] :
Tsy mankalaza ity fety ity kosa i Ruben Hilari avy amin’ny Lenguas y Comunicacion [es] noho ny fivavahany, fa mitantara zava-nitranga  tany amin’ny fitrandrahana nolazain’ny namany azy kosa izy .
Raharaham-pianakaviana ny fikarakarana ny fetin’ny Olo-masina rehetra. Nisafidy nanoratra ny fikarakarana ny mofo  i Graciela Romero avy amin’ny bolongana Compartiendo Ideas Nuevas [es]
Ary farany, mitantara ny nataony  tamin’ny fetin’ny Olomasina rehetra kosa i Juan Apaza ao amin’ny Corazon de los Andes [es]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2007/11/22/245/
 fetin’ny Olo-masina rehetra: http://en.wikipedia.org/wiki/All_Saints_Day
 fomba fijerin’ny mpanao gazety: http://elaltonoticias.blogspot.com/2007/10/el-alto-bolivia-halloween-contra-todos.html
 fandaharam-potoana mandritra ny andro: http://boliviaindigena.blogspot.com/2007/11/las-chullpas.html
 fikarakarana ny mofo: http://compartiendoideasnuevas.blogspot.com/2007/11/hornos-calientes-y-llenos.html
 mitantara ny nataony: http://corazondelosandes.blogspot.com/2007/11/un-paseo-por-todos-santos.html